Olee otú mbubata XviD / DivX Gị iTunes Library (Windows 8 gụnyere)
DivX na XviD faịlụ na-emekarị abịakọrọ ogologo video faịlụ na-ejigide a elu larịị nke zuru ezu, ma nsogbu bụ na ha na-anọkarị dakọtara maka egwu na ndị ọzọ media software omume dị ka iTunes. iTunes naanị akwado MP4, MOV, M4V videos koodu na H.264 ma ọ bụ MPEG-4.
Ị nwere ike a keukwu n'ọbá akwụkwọ nke ebudatara nkiri faịlụ na DivX ma ọ bụ XviD koodu, ma iji na-ekiri ha ị na-emekarị nwere ibudata ọzọ software ma ọ bụ codecs. Na-egwu ha na iTunes, ị na-enwe na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ na-enyere gị tọghata XviD / DivX ka iTunes akwado formats. Ke ibuotikọ emi, m tumadi-akụziri gị otú mfe mbubata DivX / XviD ka iTunes na a XviD / DivX ka iTunes Ntụgharị, nke mere na ị nwere ike igwu ma jikwaa XviD / DivX faịlụ na iTunes enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata DivX / XviD ka iTunes Na Wondershare Video Ntụgharị
Part 2: Free DivX / XviD ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online DivX / XviD ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional XviD / DivX ka iTunes Ntụgharị
Professional video Ntụgharị: Ọ bụghị nanị na-atọghata DivX ma ọ bụ XviD ka iTunes, ma na-akwado ndị ọzọ formats gụnyere AVI, MP4, MKV, MOV, FLV.
High mmepụta video àgwà: Ị nwere ike tọghata gị vidiyo na iTunes dakọtara formats na ZERO àgwà ọnwụ.
Kasị Nchigharị Speed: na 30 X kasị akakabarede ọsọ, ị nwere ike rụchaa converting a video na dị nnọọ a nkeji ole na ole.
Ike video nchịkọta akụkọ: Dezie videos na elu edezi atụmatụ dị ka trimming, cropping, na-agbakwunye mmetụta ma ọ bụ watermark, wdg
Ọkụ video ka DVD: Ọ na-enyere ị na-eme a ọkachamara DVD na buil-na DVD menu ndebiri.
Download online videos: Ị nwere ike iji ya ibudata vidiyo si na YouTube, Netflix, Vemo, na ndị ọzọ na-ekpo ọkụ video nkekọrịta saịtị.
Olee otú iji tọghata XviD / DivX ka iTunes
1. Import DivX ma ọ bụ XviD faịlụ ka usoro ihe omume
Ke isi interface nke a na ngwa, e nwere ihe button maka ị mbubata gị DivX faịlụ ma ọ bụ XviD. Ọ bụrụ na gị DivX ma ọ bụ XviD faịlụ ndị na aka, ozugbo ịdọrọ na dobe lekwasịrị faịlụ a usoro. Otu mgbe, ị ga-ahụ niile gị chọrọ faịlụ na-atụkwasịkwara ekpe ebi ndụ nke a ngwa, gosiri dị ka ndị a.
2. Họrọ otu iTunes enyi na enyi format dị ka mmepụta format
Anyị maara, iTunes akwado M4V usoro na H.264 codec. Ya mere ebe a, anyị nwere ike na-M4V ihe atụ. Ugbu a, m ga-egosi otú ịhọrọ M4V dị ka mmepụta format na ịtọ H.264 codec na ngwa a.
Pịa format oyiyi na n'akụkụ aka nri nke interface ka gbapụta na "mmepụta Format" window. Ebe a, ị nwere ike họrọ M4V format n'okpuru udi nke "Format"> "Video", na mgbe ahụ họrọ H.264 ke "Video Encoder" nhọrọ site ọkụkụ gear "Mwube" akara ngosi. Ọ bụrụ na ị mbubata ọtụtụ WAV faịlụ iji tọghata, i nwere ime ntọala ndị a maka onye ọ bụla video. A ngwa ga-akpaghị aka itinye otu ntọala niile video faịlụ.
3. tọghata DivX / XviD ka iTunes
Mgbe ihe niile bụ ihe ok, na ala-nri akuku nke Video Ntụgharị 's interface, ị nwere ike see "tọghata" button na-amalite video akakabarede. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ akakabarede ọganihu mmanya na Percent Complete na oge fọdụrụ Ile.
Mgbe akakabarede a mere, ẹkedori iTunes, na-aga "File"> "Tinye File ka Library" ka ịnyagharịa mmepụta nchekwa mbubata niile mmepụta faịlụ, ma ọ na-aga "File"> "Tinye nchekwa Library" mbubata mmepụta nchekwa kama.
Video Tutorial: Olee otú Jiri DivX / XviD ka iTunes Ntụgharị
# 1. Free DivX / XviD ka iTunes Ntụgharị Wondershare Video Converter Free
Ọ bụ nnọọ mfe iji na free DivX / XviD ka iTunes video Ntụgharị. Ọ bụ ike nke na converting video ka iTunes dakọtara formats dị ka MOV, M4V, na MP4. Ọzọkwa ị nwere ike iji ya dezie videos, download online videos.
Pro: 100% free DivX / XviD ka iTunes Ntụgharị, vasatail video akakabarede ngwá ọrụ.
1. Ị nwere ike eji naanị ya ka mbupụ nkịtị videos. HD na 3D videos bụ adịghị. Mgbe ọrụ a bụ n'ime Video Converter Ultimate.
2. The video mmepụta àgwà bụghị dị ka ihe ọma dị ka Video Converter Ultimate.
3. E nweghị ndị na video mmepụta presets.
4. Ị nwere ike iji ya na-esure video ka DVD.
Olee otú iji tọghata AVCHD na FFmpeg?
Olee otú Play na tọghata Sony AVCHD Files
Olee otú iji tọghata MP4 ka WMV Easily na ngwa ngwa na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
> Resource> tọghata> XviD / DivX ka iTunes: Olee mbubata DivX / XviD faịlụ gị na iTunes Library